Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyaha JWXO oo la kulmay Maamulada Jaaliyadaha UK iyo Ururada Bulshada UK
Gudomiyaha JWXO oo la kulmay Maamulada Jaaliyadaha UK iyo Ururada Bulshada UK
Gudomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa kulan la yeeshay Maamulada Jaaliyadaha Ogadeniya ee wadanka UK iyo Ururada bulshada gaar ahaan Ururka Haweenka iyo Ururka OYSU.
Kulankan ayaa gudomiyaha JWXO iyo Maamulada Jaaliyadaha iyo Ururada bulshadu kukala warqaateen. Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa kulankan maamulada Jaaliyadaha ku siiyay xog waran aad muhiim u ah oo ku aadan halganka shacabka Somalida Ogadeniya. Xogwarankaas kadib ayaa su’aalo laga waydiiyay gudomiyaha arrimo badan oo la xidhiidha halganka shacabka somalida Ogadeniya kuwaas oo jawaabo waafi ah laga siiyay.
Sidoo kale Maamulada Jaaliyadaha Ogadeniya ayaa kulankan kagawaramay waqabadka jaaliyadaha iyo hanaansocodka halganka kaalintooda ku aadan. Waxaakale oo halkaas ka hadlay ururada bulshada oo iyana waxqabadkoodi iyo qorshayaashooda ku aadan sidii ay ugu hiilin lahaayeen dadkooda ku hoos jira gumeysiga soo bandhigay.
Gudomiyaha Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa kulankan talo wadaag kula yeeshay Jaaliyadaha Ogadeniya. Sidoo kale gudomiyaha ayaa talooyin iyo tusaale badan ka siiyay qaab shaqeedkooda iyo kaalinta laga rabo inay kasoobaxaan.
Ugu danbeyn guddomiyaha ayaa aad ugu farxay aadna u boggaadiyay waxqabadka Jaaliyadaha iyo ururada bulshada.